IPhone Mitambo | Mitambo yakanakisa ye iPhone 6, 5s, 5c, 5, 4s uye 4 | IPhone Nhau (Peji 3)
Iron Chigaro choumambo, kurwira kuve mambo pakati pevatambi vanobva kumativi ese epasi
Iron Chigaro choushe chave kuwanikwa, yazvino Netmarble MMO mauri uchafanirwa kusangana nevatambi vakawanda munguva chaiyo yekuve mambo weIron Throne.
Ikozvino yave kuwanikwa muPUBG nyowani mepu yemurenje yeMiramar pamwe nenhamba huru yezvinhu zvitsva
Iyo Hondo Royal-yerudzi mutambo, PUBG mune yayo vhezheni yefoni nhare yakangovandudzwa nekuwedzera iyo nyowani Miramar mepu mepu mepu, mepu yaive yatovepo yemakomputa uye Xbox.
Tamba Star Wars Holochess ne iPhone yako
Kutenda kune yako iPhone uye yeDisney application, unogona kutamba Star Wars Holochess yemahara uchishandisa yakawedzera chokwadi.
PUBG 'yehondo modhi' inogona kuwanikwa munguva pfupi kune iOS
Iyo nyowani Beta 0.6.3 yemutambo unozivikanwa wePUBG uyo unowanikwa kune avo vashandisi vakanyoreswa chete mu ...
Miitomo anoti akaonekana zvirokwazvo
Mutambo weNintendo wekutanga pamapuratifomu efoni wakazopedzisira wati zvakanaka nekuda kwekubudirira kudiki kwayakaita, mumakore maviri apfuura kubva payakatangwa.
Star Wars: Galaxy yeHeroes mutambo wanhasi wezuva
Zvingaitwe sei neimwe nzira, nhasi muchitoro chekushandisa cheIOS isu tine mutambo wezuva racho ...
Fortnite inotanga mwaka 4 nenzvimbo nyowani uye maficha
Iyo yazvino Fortnite inogadziridza inotipa iwe nzvimbo nyowani nekuda kwekudonha kwekometi yakarovera pachiwi.
Nintendo inoenderera mberi kubheta pane iOS uye ichatangisa iyo chiito RPG mutambo Dragalia Yakarasika
Nechinangwa chekuramba uchikura mumusika we smartphone, Nintendo ichavhura inozivikanwa Mario Kart mu2019 uye gore rino mutambo weRPG mutambo Dragalia Wakarasika, uyo uchave nemhedzisiro huru pamusika weAsia.
Harry Potter: Howarts Mistery abuda izvozvi, asi zvinokuita kuti uve nehasha nezve micropayments
Ino haisi nguva yekutanga kuti mutambo wevhidhiyo kana hukuru hwesoftware kuburitsa kukanganiswa ne ...
Fortnite inogadziridzwa nekuwedzera limpet grenade uye nebhatani nyowani kupfura
Ivo vakomana paEpic Mitambo vanoramba vachivandudza mashandisirwo uye vachingowedzera chombo chitsva: gundamabwe rinokamhina, girinedhi raunongorova pamusoro hazvibviri kubvisa.
Fortnite inovandudzwa nemutambo mutsva mutambo uye chombo chitsva
Kutevera kuregedzwa kwemukono unotungamirwa, Hondo Royale yakagadzirisa iyo Fortnite app yeApp Store nekuwedzera chombo chitsva uye kubvumira vashandisi kutamba iyo nyowani nzira.
PUBG yeIOS inovandudzwa neye arcade modhi uye yakawanda yekuvandudza
Uku kuuya kwazvino kuApple App kunounza, pakati pezvimwe zvinhu, iyo arcade modhi inosimba uye iri nyore kutamba nayo yekutora nguva ipfupi yenguva, asi havazi ivo chete matsva.
Fortnite inotanga yakasimba, mari yayo inokwira kusvika kumadhora makumi maviri nemashanu pamwedzi
Fortnite inoenderera ichityora zvinyorwa. Akawana buzz yakawanda neyeye yekumirira runyorwa system, uye ikozvino akwanisa kusvika $ 25 miriyoni mumari mumwedzi wake wekutanga.
Enderera mberi naOrbia, muropa weIOS mutambo nema mechanic akareruka
Mutambo unonzi Orbia uye unozoita kuti uve nenguva yakanaka ne iPhone yako pasina zvakawanda zvakawandisa, mutambo wakajairika kuita nyore asi unonetsa kugona
Yechipiri yeTouchgrind BMX inosvika paAppStore uye kukunda
Iye zvino iyo vhezheni yedhijitari yerudzi urwu rwemitambo inokunda muApp Store neTouchgrind BMX 2, mutambo umo iwe waunokwanisa kugadzirisa yako mini BMX uye uve nenguva yakanaka.
Hausi iwe wega, Fortnite anga ari pasi kwemaawa gumi nemaviri
Panguva yekutsikisa ichi chinyorwa, mutambo unozivikanwa Fortnite hauna kushanda kwemaawa gumi nemaviri, panguva iyo maseva akamira kushanda.
Fortnite inogadziridzwa nekuwedzera chinhu chitsva: inotakurika nhare
Ivo vakomana paEpic Mitambo vachangobva kuburitsa nyowani nyowani yeFortnite mavanowedzera chinhu chitsva: inotakurika nhare.
Animal Crossing Pocket Camp, inowanikwa paIOS mukupera kwaNovember
Nintendo achangobva kusimbisa zviri pamutemo kuburitswa kwemutambo Animal Crossing: Pocket Camp, yevashandisi veIOS. Mu…
Nintendo yekuzivisa Animal Crossing yemafoni nhare mangwana
Iyo inotarisirwa kuvhurwa kwe Animal Crossing yemafoni nhare, ichaunzwa zviri pamutemo muna Gumiguru 25.
"Usamhanye nePlasma Sword" kana "Usamhanye nePlasma Sword" mutambo unovaraidza weIOS unobatanidza kuseka, chiito uye kudzoka zvekare
Ngano uye zvakapfuura zvinouya pamwechete muTalos Nheyo, mutambo weIOS
Iyo Talos Nheyo, mutambo unonakidza une inonakidza grafiki iyo inogona kukuchengeta iwe wakanamatira kune yako iPhone skrini kwemaoko mashoma maawa.
Iko kushandiswa kwemahara kwatinokuratidza nhasi iSago Mini Monster, mutambo wakanakisa wekuti vadiki vatambe nezvikara zvinonakidza.
RA makwikwi emifananidzo akarongedzwa naNiantic naPokémon GO
Niantic inotangisa makwikwi emifananidzo umo chero munhu anogona kutora chikamu uye kuhwina akateedzana ezvipo zvinoenderana ...
Pasina chero munhu anozvitarisira, Netflix inotangisa Zvinhu zvisinganzwisisike Iyo Mutambo paApp Store, iyo yemakumi masere-maitiro RPG nezve akakurumbira akateedzana.
Nintendo inogadziridza iyo Super Mario Run mutambo weIOS kuwedzera matsva matsva mukuwedzera pakudzikisa mutengo wemutambo uzere ne50%
Iyo yakakurumbira vhidhiyo mutambo Ruva inorova iyo App Store
thatgamecompany inotisvitsa kune iOS ecosystem iyo yakasarudzika Ruva, mumwe wemitambo yakanakisa iyo yakave yemumuseum chidimbu paSmithsonian Art Museum
Toca Hupenyu: Hofisi ndiwo mutambo mutsva wevadiki vanobva kuToca Boca
Vakomana vanobva kuToca Boca vachangoparura chishandiso chitsva mukati meiyo Toca Life chikamu chinonzi Hofisi.
Pokémon GO ichave zvakare nerutsigiro neApple's ARKit
Vakomana vanobva kuNiantic vanosimbisa kuti Apple's ARKit ichauya kuPokémon GO kuitira kuti isu tive nechokwadi chakawedzerwa chiitiko chechokwadi.
INKS pinball ndiyo yemahara mutambo wevhiki paApp Store
Iko kunyorera kwakasarudzwa neApple kurodha mahara kwevhiki ndeye INKS pinball mutambo
Toca Farm, yemahara kwenguva shoma
Mutambo wepachena uyo watinokuratidza nhasi unonzi Toca Hupenyu: Kurima, mutambo wevarimi nevarimi uko vadiki vachatofanira kubata mhuka nezvirimwa.
Niantic inozivisa mitsva mitsva yePokémon Go Mutambo muEurope
Niantic inodzosera kumashure zviitiko zveEuropean Pokémon Go Safari kuyedza kuwana yakanakisa nguva yekuti vadzidzisi vavo vePokémon vapinde.
Mitambo mitatu yemahara kana iri kutengeswa kuti iwe unakirwe vhiki rino
Kutora mukana wekuti isu tatova paweekend tinokuunzira mitambo mikuru mitatu yemahara kana nezvidimbu zvinonaka kuitira kuti ugone kutora mukana wezororo
Colossatron: Massive Global Threat, ndiwo mutambo wemahara paApp Store vhiki ino
Iyo yemahara App Store mutambo wakasarudzwa neApple ndiColossatron: Massive Global Kutyisidzira, mutambo uzere nekutenga kwe-mu-app.
Yekupedzisira Yekufungidzira XV iri kuuya ku iOS inotevera kudonha
Square Enix ichangoburitsa vhidhiyo yekutanga yeiyo ichave iyo vhezheni yeFinal Fantasy XV yemafoni nhare
Mutambo Vanotsvaga Pfuma: Zviratidzo zveGoridhe, chiitiko chakajeka icho chatinogona kurodha mahara kwenguva pfupi yekutsvaga hupfumi uye kuongorora.
Mumavhiki mashoma, vakomana veBandai vachaburitsa vhezheni yeTekken yeiyo iPhone, mutambo wekare wekurwa uyo wakarova musika muna 1994.
Mutambo wezano Tsuro, ndiwo mutambo wemahara wevhiki paApp Store
Mutambo wakasarudzwa neApple sekushandiswa kwesvondo unonzi Tsuro, mutambo wekunakidza wezano wekuyedza nawo hunyanzvi
Ratidza izvo zvaunoziva nezve La Vuelta Ciclista a España
Husqvarna Spain inotsigira zviri pamutemo La Vuelta uye inoipemberera nemutambo unovaraidza waunogona kuhwina mibairo mikuru
Colourcube ndiyo yemahara app yevhiki paApp Store
Mutambo wakasarudzwa neApple kuti upe mahara kwevhiki iColorcube, dambanemazwi rinonakidza rinotibatsira kuzorora.
Titanfall: Assault iri pakupedzisira kuuya kune iyo iPhone uye mamwe mapuratifomu
Ngatitarisei paTitanfall: Kurwiswa kuti tione kuti iyi nzira inonakidza yeApple mutambo ndeyei.
Checkmate, mutambo weiyo Meseji app ndeye yemahara app yevhiki paApp Store
Vhiki rino mutambo uyo Apple watipa mukati mechikamu yemahara kunyorera kwevhiki isu yatinowana Checkmate
Tsvaga iyo mitambo makumi maviri neshanu yakanakisa paApp Store, sarudzo yemazita eiyo iPhone yausingakwanise kupotsa kana uri mutambi wechokwadi.
Kukundikana kwePokémon Go Fest muChicago kunodzima zviitiko zvakarongwa muEurope
Iyo yakasimba Niantic yakazivisa kuti mazuva akarongerwa Nyamavhuvhu wePokémon GO Fest akanonoka pasina zuva idzva
Sevha anopfuura maeuro matanhatu nemitambo iyi miviri yevana
Kazhinji pandinonyora nezvemitambo yevana vadiki, ini ndinogara ndichireva kune vanogadzira D. Panda, Sago uye ...
Iyo yemahara app yevhiki kubva kuApp Store kuti utore mahara ndeye Domino Drop
Mutambo wakasarudzwa naApple kuti uupe zvemahara ndiDomino Drop, mutambo unobatanidza dominoes neTetris
YAKO - Zvishoma pamusoro peMavhiri, mutambo unovaraidza une retro aesthetic
MOW - Minimal On Wheels, retro uye arcade gamer yakatarisana mutambo uyo unogara uchikunetsa, uye zvakanyanya kukosha, unokutendera iwe kuve nenguva yakanaka
Maseva eNiantic haasi kukwirisa Pokémon Go Fest
Pfungwa yazvino yeNiantic yekudzosa vashandisi ava ndeye Pokémon Go Fest, uye kwave kutadza kuzere maererano nekugadzirira.
Pokemon Go, gore rekutanga kuburitswa munhoroondo
Pokemon Go yaive mhedzisiro rekodhi kurodha pasi pakuvhurwa kwayo kuti hapana akakwanisa kurova gore rakatevera, uye zvakare hazvizo.
Mushure memavhiki asinganetseke, iyo nyowani yeApple 11 App Store inotanga kuratidza zvemukati zvemukati pamwe nehurukuro dzekuvandudza.
Tinoda kukuratidzai kuti ndeapi mashanu akanakisa basketball mitambo yeIOS, kuti iwe ugone kuve nenguva yakanaka yekunakidzwa nemutambo waunofarira.
Muzvinafundo Layton mutambo uchangoburwa unouya ku iPhone ne iPad zvisati zvaitika
Katrielle uye mamirionea 'Kurangana ndiro zita idzva mupurofesa Layton saga inouya kumidziyo mbozha vhidhiyo isati yanyaradza
Muvhiki ino tichava neThe Legendary Pokémon, yavo!
Niantic pachayo yakasimbisa zviri pamutemo kuti vhiki ino ya Chikunguru 22 - 23 iyo Legendary Pokémon ichasvika ...
Pokémon GO yakagadziridzwa yeIOS ine dzinoverengeka kugadzirisa
Mutambo uyo uchangotendeuka gore rimwe chete paApp Store unoramba uchipa kuvandudza mushure mekuvandudza kukuru uko ...
Dr. Panda's Fair, ikozvino yemahara ye iPhone ne iPad
Iyo Dr Panda Fair mutambo wakakwana wezvekudzidzisa wakagadzirirwa vadiki vari mumba iwe waunogona kuwana mahara
Atom Mhanya, yemahara chikuva mutambo wenguva yakatarwa
Mutambo wepuratifomu uyo ​​watinokuratidza nhasi, Atom Run, ichatibvumidza kunakidzwa nemhando iyi yemutambo mahara, nepo kupihwa kwacho kuchiripo
Mutambo wepuratifomu, ndiwo mutambo weApp Store wevhiki
Mutambo wakasarudzwa naApple semutambo wevhiki iri illi, mumwe mutambo wepuratifomu uyo ​​uchaita kuti tive nenguva yakanaka.
Virtua Tennis Dambudziko ikozvino yawanikwa kuburikidza SEGA Nokusingaperi
Imwe SEGA Classics, Virtua Tennis Dambudziko yakangomhara paApp Store uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
Iyo inouya kune iOS Street Fighter IV Champion Edition, uye iri zvakare kutengeswa
Hapana chakaderera pane Street Fighter IV Champion Edition inouya kune yedu iPhone, inozivikanwa yekurwa mutambo mune yakasarudzika yakasarudzika maitiro.
Mutambo wevadiki vatinokwanisa kurodha mahara ndiToca hupenyu: guta, mutambo wevana vanosvika makore mashanu
Iyi RPG iri mubhuku-mutambo fomati yave iri sarudzo yevakomana kubva kuCupertino yausingafanire kupotsa, kunyanya kana iri yemahara zvachose.
Pokémon Go chegore rekutanga rine kupemberera kwakakosha
Range rave gore kubva hupengo hwatanga, mhomho yevanhu munzvimbo dzakananga, vachiwedzera ...
Ridge Racer Slipstream, yemahara app yevhiki paApp Store
Iyo yemahara App Store mutambo wevhiki ndeye arcade classic Ridge Racer Slipstream
Mini Motor Mujaho mutambo unopemberera makore mashanu uine hombe kuvandudza
Mune ino kesi inguva yakakosha kwazvo yeMini Motor Racing mutambo, sezvo ichizadzikiswa ...
1979 Revolution, mutambo wemuvhi wemuvhi, wakasununguka kwenguva yakati rebei
1979 Revolution inguva yakajeka iyo sarudzo yega yega ine mhedzisiro uye yakavakirwa paIslamic Revolution.
Yakanakisa indie mitambo ye iPhone
Isu tinokuratidza iyo 9 yakanakisa indie mitambo ye iPhone uye iPad. Unovaziva vese here? Usapotsa chero eaya ehunyanzvi aunofanirwa kutamba kunyangwe zvodii.
Iye zvino yave kuwanikwa paApp Store Futurama: World of Tomorrow
Mutambo Futurama: Nyika dzeMangwana, zvichibva pane zvakateedzana zita rimwe chete rave kuwanikwa paApp Store kurodha mahara.
Race Madzimambo, asingatyi mutambo wemujaho uyo unomutsiridza iyo App Chitoro
Tiri kutaura nezveRace Kings, inonakidza uye inokwikwidza mutambo wemujaho uyo une izvo zvingangove zviri zvese zvigadzirwa iwe zvawakanga wakumbira.
Yakanakisa mitambo yemotokari
Ndeapi akanakisa emitambo mitambo paApp Store? Tsvaga runyorwa urwu nemitambo gumi nemaviri yakanakisa yemijaho yeApple uye iPad.
Mutambo wakasununguka uyo Toca Boca anotipa vhiki ino unonzi Toca Bvudzi Salon Me, kwatinogona kushandura zviri nyore kutaridzika kweshamwari uye nemhuri.
Iyo nyowani vhezheni yePokémon Go 1.37.1 yave kuwanikwa kune vashandisi veIOS nekuvandudzwa kwakasiyana ...
SEGA Nokusingaperi kweIOS uye Android iri pano, musangano unounza pamwechete akati wandei akanakisa eSEGA Classics mune imwechete application.
Toca Lab: Zvirimwa ndiwo mutsva weToca Boca mutambo wevadiki
Mutambo mutsva weAB unonzi Toca Labs: Zvirimwa, mutambo umo vana vadiki vachatofanira kuyedza zvirimwa murabhoritari.
Beat Stomper ndiwo mutambo wemahara paApp Store
Beat Stomper ndiyo yemahara app yevhiki paApp Store, unonakidza pamwe neyakareruka mutambo uyo unozoita kuti tirambe tichivaraidzwa.
Sphero's yazvino toyi ndeye Spiderman iyo yatinozodzora needu iPhone
Vakomana vanobva kuna Sphero, anozivikanwa nekuvhura robhoti yeUSB-8 ine hushamwari, vanotangisa Spiderman nyowani yekudyidzana nayo kuburikidza ne iPhone yedu.
Angry Birds Evolution ndiyo RPG nyowani kubva kuAngry Birds fekitori
Vakomana vanobva kuRovio vanotangisa Angry Birds Evolution, mutambo mutsva wekufarira shiri diki dzinozivikanwa, ino nguva yevakuru ...
Zvirinani Tose ishanduro nyowani yakagadzirirwa naMicrosoft yeMinecraft, mutambo wayo wenyenyeri uyo kuwiriranisa kuchave patent.
Mifananidzo yekutanga yeSouth Park: Muparadzi wefoni yeIOS
South Park: Muparadzi wefoni, iyo kadhi mutambo wevhidhiyo yemutambo wevhidhiyo wakatarwa kubva pane dzakateedzana dzinosvika muna2017.
FRAMED ibhuku rinopindirana-rakavakirwa iro iro, kuburikidza nemifananidzo yakanaka, iwe uchafanirwa kugadzirisa zvekare mavignettes ekuvaka iyo nyaya
Mutambo uchangoburwa uyo mugadziri Toca Boca anotipa mahara evana ndeye Toca Lab: Elements
Monument Valley 2 inouya kuApp Store yakanyanya kunaka kupfuura yekutanga vhezheni
Iyo yakakurumbira yekuvaka dhizaini mutambo Monument Valley 2 inouya kuApp Store kuitira kuti tigone kuenderera nekugadzirisa zvakavanzika nerubatsiro rwemaonero.
Iyo Robhoti Fekitori, yemahara kwenguva shoma
Mutambo uyo watinokuratidza nhasi, Iyo Robhoti Fekitori, inobvumira idiki diki reimba kugadzira marobhoti anonakidza
Akanakisa Clash Royale manomano
Tsvaga yakanakisa Clash Royale tricks kuti ubudirire mumutambo uye uve mutambi anozivikanwa.
Mitambo yeDragons, yemahara kwenguva shoma
Mutambo wazvino kubva kunovandudza G5, Mutambo weDragons, unowanikwa kurodha mahara kwenguva yakati rebei
Mushure mePokémon Go, Magikarp Jump inosvika, mutambo mutsva muPokémon zvakasikwa
Mushure mefivha iyo yakagadzirwa nePokémon Go, Magikarp Jump inosvika, mutambo mutsva muPokémon franchise uko kwatinozosimudza hushamwari Magikarp.
Pokémon Go inotanga kuranga vashandisi vanobiridzira
Pasina yambiro, vakomana veNiantic vanotanga kuranga vashandisi vanobiridzira mune yakakurumbira Pokémon Go mutambo.
Mbudzi Simulator mbudzi inoita shamwari nyowani muGoat Simulator Payday
Chaizvoizvo kubvira payakatangwa, Goat Simulator wave mumwe wemitambo inoshamisa inowanikwa paApp ...
Mutambo Unopenga Taxi unobva ku4,99 euros kuti uve wakasununguka muApp chitoro
Uyu ndiwo mumwe wemitambo iyo yatisingakwanise kupotsa sezvo iri Sega yakasarudzika ...
PES 2017 ikozvino yave kuwanikwa paApp Store
Iye zvino yave kuwanikwa muApp Store imwe yemitambo yakanakisa yenhabvu yenguva dzese, PES 2017, nekutamba kukuru
Futurama: Nyika dzeMangwana dziri padyo nekona yeIOS
Futurama: Nyika dzeTomorrw dzinotisiyira karavhani yayo yekutanga uye chiratidzo chakajeka chekuti ndiani ari shure kwekusimudzirwa kwemutambo, hapana mumwe kunze kwaMat Groening.
Eggggg puking chikuva ndiyo yemahara mutambo wevhiki paApp Store
Mutambo wakasarudzwa naApple kuupa zvemahara ndiEgggg - Kurutsa chikuva, mukurutsa ichatibvumira kukunda iwo mazinga
Kusaruramisira 2 kunosvika kuzosangana nechido chevateveri vayo, zvakanaka sepakutanga
Kusaruramisira kwakadzoka kuzogutsa izvo zvinodikanwa zvakanyanya zvevateveri vake, uye zvakare kutisiira isu takashama miromo.
Nhoroondo yeZelda uchave mutambo unotevera waNintendo kuvhura pamusika we smartphone
Munenge rinenge gore, Nintendo ichavhura Legend yeZelda, vhezheni itsva yakashandisirwa nharembozha.
Kitten - Wangu Wandinodisisa Pet App yevhiki paApp Store
Iko kunyorera kwakasarudzwa neApple kuti ipe yemahara kwevhiki Kitten: Wangu Wandinodisisa Pet,
Iyo Sims classic iri kuuya kuIOS mune yemahara-kutamba mafomati munguva pfupi
Zvigadzirwa zvemagetsi zvave kuda kuvhura mutambo Sims Mobile, mutambo uyo unotipa iko kwekare kushanda kweiyo desktop vhezheni
Pictionary neEtermax, yako nyowani yakarova maererano nemitambo «yakasarudzika»
Etermax, ivo vanogadzira blockbusters vakaita sevasina kupfeka, vakasanganiswa kumusoro, uye Trivia Crack vadzoka nePictionary.
Battle Bay ndiwo mutambo mutsva uyo Rovio anodzokera kukakavara
Iwe unoda kuziva here kuti chii chinonzi Battle Bay Rovio's new smash hit? Isu tinokupa iwe ino inomhanya-mhanya online vhidhiyo mutambo weiyo iOS.
Star Wars Pinball yemahara kwenguva yakati rebei
Nhasi 'Star Wars Day' inopembererwa, saka zvinogoneka kuti vazhinji vevanoda saga iri ...
Chameleon Mhanya, dhawunirodha mahara kuburikidza neApple Store app
Kambani yeCupertino inosarudza kupa mubairo kune avo vanoshandisa chishandiso kuburikidza nekodhi dzenhare, mune iyi Chameleon Run,
Enchanted mabhuku, emahara kwenguva shoma
Iko kunyorera kwatinokuratidza nhasi kuti utore mahara maEnchanted Mabhuku, yakajeka graphic ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros
0,49 euros inogona kunge iri iwo mashoma mutengo wemaapps nemitambo muApp Store
Iwo achangoburwa Apple mafambiro muTunes Connect anotiratidza kuti mutengo wepasi uno ungave sei 0,49 euros
Iri bhuku reMagician, yemahara kwenguva yakati rebei
Mutambo wekunakidzwa Magnetic's Handbook: Yakatukwa Mupata yePadad inowanikwa mahara paPad chete.
Chinja mafoto ako uye mavhidhiyo mumadhirowa neToonCamera, yemahara kwenguva pfupi
Kutenda ToonCamera, tinogona ipapo shandura mifananidzo yedu uye mavhidhiyo mumifananidzo inosetsa.
Apple inowedzera mutengo wekushandisa muMexico, Spain nedzimwe nyika dzeEurope
Apple yatanga kutumira email kune vanogadzira inozivisa inotevera mutengo kuwedzera kwezvibatsiro muEurope neMexico.
Kirasi yehunyanzvi naDr Panda, yemahara kwenguva pfupi
Mutambo uyo watinokuratidza nhasi wekurodha mahara, Art Kirasi naDr Panda, inowanikwa kuti utorwe mahara.
Super Mario Run inomutsiridzwa nekuwedzera zvivakwa zvitsva
Iyo yazvino yekuvandudza kuSuper Mario Run inowedzera yakakosha mitsva maficha ayo anovandudza mutambi mutambi.
YeGoridhe Makwara 2, inonakidza adventure nyaya yemahara kwenguva yakaganhurirwa
Graphic adventures yaive nenguva yavo muma 90 uye kutanga 2000, asi kubvira ipapo hatina kukwanisa ...
Mitatu mitambo yemahara yenguva shoma, uye kushamisika, kunakidzwa kwevhiki
Nhasi tinokupa iwe chirevo chemitambo mitatu yemahara kwenguva yakati rebei ye iPhone ne iPad, uye firimu rekutanga iro rauri kuda.
Rakanaka Rambo: Mashiripiti, ndiyo app yevhiki iri paApp Store
Mutambo wakasarudzwa neApple sekushandiswa kwesvondo ndiCheka Tambo: Mashiripiti, mutambo watichasangana nawo mapuzzle 160.
Yakanakisa magemhu emitambo ye iPhone uye iPad
Wakagadzirira kuisa uropi hwako kushanda? Nhasi tinokuunzira sarudzo pamwe neyakanakisa mitambo yemapuzzle ye iPhone ne iPad
Bacon Kutiza, iwo mutambo wakaiswa munzvimbo yekutanga yeApp Store
Bacon Kutiza, mutambo wakasarudzika watichabatsira nguruve inoyevedza kutiza kubva mukutapwa kwayo nehunyanzvi.
Iyo mitambo inotyisa kwazvo ye iPhone
Nhasi ndinokurudzira sarudzo pfupi nemamwe emitambo yakanyanya kutyisa ye iPhone ne iPad, wagadzirira kusangana nezvakashata here?
Alice Akabatwa muWonderland, yemahara kwenguva shoma
Mutambo wemahara uyo watinokuratidza nhasi ndiAlice Akabatwa muWonderland, mutambo wekunakidzwa uye wepuzzle kune vadiki.
Hyperburner, ndiwo mutambo wepachena weApp Store wevhiki
Mutambo wemahara wevhiki wakasarudzwa naApple ndiHyberburner, mutambo wengarava une mifananidzo inogamuchirwa asi ine ruzha runonakidza.
Toca Hupenyu: chipatara, mutambo mutsva paApp Store kune vadiki
Mutambo mutsva weToca Boca unonzi Toca Hupenyu: Chipatara, mutambo umo vana vadiki vanozofanira kubata chipatara.
Yakanakisa mitambo yeApple munhoroondo
Nhasi muActualidad iPhone tinokumbira iwe sarudzo yemakanakisa emitambo yeApple yenhoroondo yese uye tinokukurudzira kuti upedze runyorwa
Yakanakisa mitambo yeRetro ye iPhone
Nhasi ndinokuunzira sarudzo pfupi nemitambo mitatu yakanakisa yeRetro ye iPhone, iwo aunowana achigadziriswazve uye achadzosa ndangariro zhinji
Mitambo yevana yekugovana nevana vako pazororo rino
Nhasi tinokurudzira sarudzo pfupi nemimwe mitambo yevana yakanakisa kuti iwe unakirwe nevana vako pazororo rino
Guta Rangu - Chipatara, mahara kwenguva pfupi
Mutambo uyo watinokuratidza nhasi, Guta rangu - Chipatara, mutambo uyo vana vadiki vanozozviisa mushangu dzachiremba kana manesi.
Mitambo mitsva yekushandisa zvakanyanya zororo iri
Nhasi muActualidad iPhone tinokurudzira mimwe mitambo mitsva ye iPhone nePadad yekushandisa mazuva ano ezororo
Minecraft Marketplace ikozvino inowanikwa mumutambo Minecraft: Pocket Edition
Chokwadi vazhinji venyu matora pasi Maincraft pane yako nharembozha kana kunyangwe pakombuta yako. Kana uchibva ...
6 mitambo yemahara yekutanga Easter parutsoka rwerudyi
Kuti uwane mazororo ako eIsita kutanga kwakanaka, tinokuunzira sarudzo yemitambo mitanhatu yemahara kwenguva yakati rebei. Mhanya ivo vanobhururuka!
Sago Mini Monsters, yemahara kwenguva shoma
Mutambo wevadiki mumba vatinokuratidza nhasi iSago Mini Monsters, mutambo une mutengo wenguva dzose we2,99 euros.
Toca Hupenyu: Chikoro, chemahara kwenguva pfupi
Vakomana veToca Boca vanotipa mutambo weToca Hupenyu: Chikoro chemahara kwenguva yakati rebei, mutambo une mutengo we2,99 euros.
Geekbench 4, Goat Simulator uye mamwe emahara maapplication kwenguva pfupi
Nhasi tinokupai mitambo mitatu yemahara uye mashandisiro, mitambo uye maapplication atinogona kusevha kusvika kumaeuro e8
Iyo Blyss puzzle app ndiyo yemahara app yevhiki
Iyi svondo yemahara app yevhiki kubva kuApp Store mutambo wepuzzle unonzi Bliss
Roma: Yakazara Hondo - Bharabhari Invasion inozosvika iyi edition kune iyo iPad
Kuuya kweRoma: Yakazara Hondo - Bharabhari Invasion, inogona kuve pamberi uye shure maererano nemabatiro atinoita paIpad.
Nintendo achiri kufarira iyo yakabhadharwa modhi yeSuper Mario Mhanya pamusoro peiyo freemium modhi
Vakomana veNintendo vanotaura nezve akasiyana mabhizimusi mamodheru ane mitambo yemafoni nhare.
Super Mario Run inosvika vhezheni 2.0 ine hombe nhamba yezvinhu zvitsva
Nintendo achangobva kuburitsa itsva yekuvandudza yeApple, achiwedzera mavara matsva uye nhanho nyowani dzinowanikwa mune yemahara vhezheni
Zvikamu zveApp Store senzira yekusimudzira mimwe mitambo
Apple yakafunga kubatsira indie mutambo vanogadzira vane chikamu chisingaperi apo mazita akanakisa achawedzerwa.
Chikamu chechitatu cheVatsvaki vePfuma, mahara kwenguva yakati rebei
Iyo yakajeka graphic Vanotsvaga Pfuma: Kudzingirira Ghosts kunowanikwa kurodha mahara kwenguva pfupi.
Bean's Quest, ndiwo mutambo weApp Store wevhiki
Mutambo wakasarudzwa neApple kuti upe mahara muvhiki rese ndeyeBean's Quest, mutambo wepuratifomu une 150 mazinga
Imwe yechinyakare yadzoka: Midzimu uye maGoblins ave kuwanikwa paApp Store
Iyo yazvino yakasarudzika kubva kuma80s kurova iyo App Store inonzi Ghosts uye Goblins, inonakidza chikuva mutambo.
Sirivheri Bullet, yemahara kwenguva shoma
Mutambo watinokupa nhasi kuti utore mahara unonzi Sirivheri Bullet, mutambo une maonero e3D maticharwa nemadhimoni
1942, iyo arcade classic, ikozvino inowanika yeIOS kubva kuCapcom
Iyo yakasarudzika yemakumi masere nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe, 80, ichangomhara, haina kumbobvira yataurwa, muApp Store uye muGoogle Play Chitoro.
Kuda Iwe Kwa, ndiwo mutambo wepachena weApp Store wevhiki
Iyo yemahara mutambo kubva kuApp Store yakasarudzwa naApple inoyevedza rudo nyaya inonzi Kuda Iwe Kwauri
Iyo Great Fusion graphic adventure, inowanikwa kurodha mahara kwenguva pfupi
Iyo Great Fusion chiitiko chakajeka icho chinozotiyeuchidza nezveayo mitambo yengano yema90s seMonkey Island, Larry, Indiana Jone uye nhamo yeAtlantis
Nhasi tirikukurudzira mitambo mishanu yemahara uye yakasununguka yekushandisa nguva yako wakafa, uye kana iwe usingade iwo andinofunga ... Rumbidza rako!
Saka ngatisvikei pakuziva VaEscapists, mutambo uri kuratidza kuti uri kubudirira pane iyo iOS App Store uye isu tiri kuzokuudza kuti sei.
Mutambo wakasarudzwa naApple sekushandiswa kwevhiki ndiNightgate, mutambo une dhizaini dhizaini uye inonakidza rwiyo.
Chirevo chekuda kuziva chakaburitswa muNorth America. Sekureva kwemishumo yazvino yakaburitswa mukuberekwa kwevatengi venyika, ...
Husiku hwakanaka inyaya yekudyidzana yevana vadiki mumba kuti vaende kunorara vachitamba nemhuka.
Mutambo uyo watinokuratidza nhasi kurodha mahara uchatitorera panjodzi yekutsvaga pfuma
Alto's Adventure iri kutengeswa kwenguva shoma pachiitiko chekuzvarwa kwayo kwechipiri uye vanotiratidza vhezheni yayo nyowani inosvika muzhizha.
Iyo yekudyidzana nyaya Little Green Kutasva Hood ndiwo mutambo wakasarudzwa naApple semutambo wevhiki uye unokwanisa kutorwa mahara kusvika rinotevera China
Mutambo wekupedzisira uyo Toca Boca inotipa kuti tiutore mahara ndeye Toca Kicheni, mutambo umo vana vadiki vanoita miti yavo yemipaini mukicheni
Niantic yakashuma chiitiko chiri kuuya chePokémon GO, umo mukuwedzera pakusanganisira Pokémon nyowani, maficha matsva achawedzerwa.
Kwechinguva chidiki tinogona kurodha pasi mutambo Infinity Blade II, uye chengetedza iyo 6,99 euros iyo yainayo semutengo wayo wenguva dzose.
4 LEGO seti, inowanikwa chete ma0,99 euros imwe neimwe
Kwechinguva chidiki, vakomana veWarner Bros vari kutipa mana maLego seti isingasviki euro imwe chete. Mutengo waro wenguva dzose ndeye 4,99 euros.
Zuva reValentine rave pedyo nekona uye vaNiantic vafunga kuita chiitiko chakakosha kuti vapemberere muPokémon GO.
Mutambo wemahara uyo watinokuratidza nhasi Toca Chitoro, nawo iwo madiki anotanga kujairana nekutenga nekutengesa.
Iyo Roofbot Puzzler Pane Iyo Roof mutambo une mutengo wenguva dzose we2,99 euros muApp Store, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuirodha mahara.
Wakafarira Alto's Adventure here? Iwe unofarira Skateboard? Nhau dzakanaka: Snowman akazivisa kuti vachange vachiburitsa Skate City, mutambo unovimbisa kunakidza.
Super Mario Run yakangovandudzwa ichiwedzera nyowani yakapfava modhi pamwe nechiitiko chitsva.
Nhau dzakaipa dzevateveri veNintendo: MuJapan mutambo wevhidhiyo hofori yazivisa kuti Animal Crossing ichanonoka.
Iwe unofarira mitambo senge Zelda? Zvakanaka, iwe unofara kuziva kuti pane nguva shoma yeOceanhorn 2 yekurova iyo App Store. Iyi ndiyo mifananidzo yake yekutanga.
Wakatadza here mutambo weaya asingagone Flappy Shiri mhando? Nhau dzakanaka: mugadziri wayo akatanga Ninja Spinki Dambudziko uye zvakaomarara sezvazvinonzwika.
Nintendo anodzokera kubasa nekutanga Pokémon Duel yeIOS, mutambo mutsva wezano nePokémon sevatsigiri.
Mutambo mutsva uyo watinogadzira G5 anotipa iDhorobha Yakadzika: Iwo Makenduru eTwin, mutambo watinozove vampire.
Iwe unofarira trivia mitambo? Ko kana isu tichiwedzera isu zano mu cocktail? Une zvese izvo uye zvimwe zvakawanda muIntuiton.
Mwedzi mumwe nemazuva mashanu mushure mekuburitswa kweSuper Mario Run yega yeIOS, mutambo hauchisiri pakati pemakumi mashanu ekushandisa kwakanyanya kweApp Store.
Rovio iri kutipa kwechinguva iyo Angry Birds Space mutambo kurodha mahara kwenguva yakati rebei.
Zvinotaridza kuti Nintendo achazadzisa vimbiso yake: yatove kuzivisa kuti Fire Emblem Magamba anosvika paApp Store muna Kukadzi 2.
Sago Mini Disguise vacheche ndiwo mutambo mutsva wevadiki mumba vatinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei.
Iko kushandiswa kwevhiki rakasarudzwa naApple maBusy Shapes, mutambo wevana vari pakati pemakore maviri kusvika mashanu ekuberekwa.
Chenjerera Pokémon GO! Mutambo une njodzi kwazvo! ... kana chimwe chinhu chakadai ndizvo zvavari kutaura kuChina. Pane here zvinangwa zvakashata muchirevo ichi?
Questerium: Sinister Utatu ndiwo mutambo watinokuratidza nhasi kurodha mahara kwenguva yakati rebei.
Chikamu chekutanga cheThe Walking Dead: A New Frontier mutambo unowanikwa kurodha mahara.